Guddiga baarlamanka Soomaaliya u qaabilsan dastuurka oo doortay gudoomiye – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Kulan uu magaalada Muqdisho ku yeeshay guddiga baarlamaanka u qaabilsan dastuurka iyo hiigsiga doorashada 2016 ayaa lagu doortay doortay guddoomiye iyo ku xigeen.
Wasiiru-dowlihii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya, xildhibaan Cabdi Cali Xasan ayaa loo doortay guddoomiyaha guddsiga dastuurka, iyadoo xildhibaan Cilmi Maxamed Nuur loo doortay guddoomiye ku xigeenka guddigaasi.
Gudoomiyaha cusub ee la doortay xildhibaan Cabdi Cali Xasan oo la hadlay guddiga doortay ayaa codsaday in lala shaqeeyo si baarlamaanku uu ugu guuleysto inuu wax ka qabto dastuurka qabyada ah iyo diyaarinta doorasho uu dalku galo xilliga loo qorsheeyay.
Guddigaan ayaa ka shaqeyn doona dhameystirka dastuurka dalka oo ay xildhibaanada baarlamaanku ku leeyihiin dowr weyn, iyadoo horay loo qorsheeyey in sanadka 2016 ka hor uu dalka ka jiro dastuur buuxa.